ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံကို အာဆီယံ လူသားချင်းစာနာမှု ကူညီပေးရေးအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၏ နည?? - Yangon Media Group
ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံကို အာဆီယံ လူသားချင်းစာနာမှု ကူညီပေးရေးအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ၏ နည??
အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှု ကူညီပေးရေးအဖွဲ့မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ နည်းပညာအကြံပြုချက်များဖြင့် ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံ မီးငြှိမ်းသတ်မှု လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံ မီးလောင်ကျွမ်းမှု အမြန်တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ဦးဆောင်၍ AHA Centre နှင့် Singapore Civil Defence Force တို့မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တို့သည် ဧပြီ ၂၈ရက် ည ၆နာရီက အမျိုး သမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန (ရန်ကုန်)တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဆွေးနွေပွဲတွင် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၏ နည်းပညာအကူအညီ ရယူဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ အာဆီယံကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကြံများရယူ ဆွေးနွေးပြီး မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က ဦးစီးဆောင် ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့် သန့်ရှင်းမှုဌာနမှ ဒုတိယဌာနမှူး ဒေါက်တာအောင်မြင့်မော် က ဧပြီ ၂၉ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ”အာဆီယံနိုင်ငံက ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေဆီ အကြံဥာဏ်တွေ ကိုရယူ ဆွေးနွေးပြီးတော့ မီးငြှိမ်း သတ်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင် မီးလောင်ပြင်ဆီဆင်း ပြီး မီးငြှိမ်းသတ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မီးလောင်ပြင်မှာ ငြှိမ်းသတ်နေတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲ ဆောင်ရွက် နေတာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ထပ်မံမှာယူထားသည့် Bio foam ဆေးရည်ဂါလန် ၅ဝဝဝမှာ ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိနေ ပြီဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဆေးရည်များကို အသုံးပြုငြှိမ်းသတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မီးလောင်မှုနှင့် မီးခိုးထွက်မှု အတွက် ကနဦးအနေဖြင့် ဧပြီ ၂၇ ရက်က Bio foam ဆေးရည် ဂါလန် ၁၈ဝဝ အသုံးပြု မီးငြှိမ်းသတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခု ပက်ဖျန်း ငြှိမ်းသတ်နေ သော Bio foam ဆေးရည်ဂါလန် ၅ဝဝဝသည် လုံလောက်ခြင်း မရှိလျှင် ထပ်မံဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ အောင်မြင့်မော်က ဆက်လက်ပြောသည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် Bio foam ဆေးရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် သုံးစွဲနိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြေပြင်တွင် လက် တွေ့သွားရောက် လေ့လာကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးရေးအဖွဲ့မှ အရေးပေါ်ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုအရာရှိ ယော(စ်)မာယိုမယ်လိုလီ (Yos Maryo Malole) က ”မီးငြှိမ်းသတ် ဖို့အပြင် ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာ ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြံပေးတာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကာ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာထောက်ပံ့တာ တွေ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ နေရာကို အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲ၍ တစ်ပိုင်းကို တစ်ရက်နှုန်းဖြင့် လူအင်အား စက်အင်အားများ သုံးကာ လေးရက်အတွင်း အပြီးသတ် ငြှိမ်းသတ်သွားရန် စီမံချက်များ ရေး ဆွဲထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးဝင်းက ပြောသည်။ အမှိုက်မှ စွမ်းအင်တစ်ရပ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ နောင်နှစ်နှစ်တွင် အမှိုက်များ လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီး ချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဧပြီ ၂၈ ရက်က ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံကွပ်ကဲ ရေးရုံးသို့သွားရောက်ကာ မီးငြှိမ်း သတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ရှေ့ ဆက်လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ် များကို ဆွေးနွေးရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမီးခိုးငွေ့ ကြောင့် ဆေးရုံရောက်ရှိသည့် လူနာ ၂၇ ဦးရှိခဲ့သည့်အနက် ၁၃ ဦးမှာ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (လှိုင်သာယာ)မှ သိရသည်။ မီးခိုးငွေ့များသည် ရပ်ကွက်များ အတွင်းသို့ ပျံ့နှံ့မှုမှာ ယခင်ရက်များထက် လျော့နည်းလာပြီ ဖြစ်ပြီး မီးငြှိမ်းသတ်နေသူများ အနေ ဖြင့် အမှိုက်များအတွင်းမှ ပုလင်းကွဲများသည် ခြေထောက်နှင့် လက်များကို ရှခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် ကုသပေးနေရပြီး ယင်းအမှိုက်ပုံအနီးတွင် ပရဟိတအဖွဲ့ များထံမှသိရသည်။ Bio foam ဆေးရည်အသုံးပြု၍ မီးငြှိမ်းသတ်မှုကို တပ်မတော်သားများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှတ်(၅)လုံခြုံရေး ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ခွဲမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ ဝန်ထမ်းတို့က ပူး ပေါင်းပါဝင် ငြှိမ်းသတ်နေကြောင်း သိရသည်။
မာလီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များ၏ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တူရက်(ဂ??